संसदबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति चोर बाटो भएर पुनः प्रधानमन्त्रीमा टाँसिइरहनु हदको पराकाष्ठा हुन्छ । :डा. भीमार्जुन आचार्य - Babal Khabar
Sunday, June 13www.babalkhabar.com : For your kind information
काठमाडौं संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको यो सरकारले बहुमत गुमाएको अवस्थामा अब यही प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ भन्न अलि कठिन नै हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा ७६ (२) कै प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामाचाहिँ राष्ट्रपतिको निर्णय कुर्नुपर्छ ।
विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त त हुन्छन् । तर, अर्को सरकार नबनेसम्म यिनी नै कामचलाउ प्रधानमन्त्री रहन्छन् । र, त्यसपछि ७६ (३) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । तर, ७६ (३) अनुसार सरकार गठन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, फेरि ७६ (३) अनुसार विश्वासको मत पाएन भने ७६ (५) मा जानुपर्यो ।
७६ (५) मा जाँदा पनि एकपटक ७६ (२) मै फर्कनुपर्ने पनि हुन्छ । त्यो भनेको एकपटक फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुराउन सक्ने अवस्था आएको खण्डमा ती दलहरु मिलेर नै सरकार बनाउने हो । तर, विश्वासको मतको सामना गरेको अवस्थामा ७६ (२) पूरा भएको मानिने भएकाले ७६ (३) मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नै दिएनन् भनेचाहिँ ७६ (२) सकियो र ७६ (३) र ७६ (५) बाँकी रहने भयो ।
तर, एउटा गम्भीर संवैधानिक र नैतिक प्रश्न के हुन्छ भने अहिले विश्वासको मत नपाइ सकेपछि ओलीले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने हुन्छ । यदि फेरि ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु भनेको हदको पराकाष्ठा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ओलीले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिएर अरु कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दा त्यो चाहिँ प्राविधिक र स्वभाविक विषय बन्न सक्छ । तर, संसदबाट विश्वासको मत नपाएको व्यक्ति चोर बाटो भएर पुनः प्रधानमन्त्रीमा टाँसिइरहनु चाहिँ हदको पराकाष्ठा हुन्छ ।
तर, सम्भावना यही नै छ । प्रधानमन्त्री ओली कानुन र संविधान नमान्ने व्यक्ति भएको कारण पनि ७६ (३) अनुसार नै ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएर जाने सम्भावना म प्रबल देख्छु । ओलीले त्यही नै गर्छन् अन्तिममा । उनी आफंैले फेरि दाबी गर्छन् । त्यो राम्रो होइन र दुःखद पनि हो । त्यसो भएमा अति को पनि अति हुन्छ । धारा ७६ को ३ र ५ मा पनि विश्वासको मत पाएन भने त अब विघटनमा गइहाल्यो नि । यिनको अन्तिम लक्ष्य संसद विघटन नै हुन सक्छ ।
साभार : pathivara news
Prevसभापति देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा आज बसेको बैठकले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सम्बन्धि यस्तो निष्कर्ष
nextकोरोनाको कारण नेपालमा अहिलेसम्मकै धेरै २ सय २५ जनाको मृत्यु हुदा ५ हजार २२५ जनाले कोरोना जितेका छन् ।
डेनमार्कले पहिलो खेलमै जित गुमायो तर यसरी खेलाडी बचायो
डेनमार्क र फिनल्याण्ड बिचको पहिलो खेलमा घट्यो यस्तो अप्रिय घ’टना ! खेलाडीको रुवावासी, खेल स्थगित
खुशीको खबर : सिजीको इन्ट्रीसँगै इन्टरनेटको प्रतिस्पर्धा नयाँ दिशामा, स्पिड कति बढाउँदै र मूल्य कति घटाउँदै , पूरा हेर्नुहोस्।
युरोकप शुरु हुनुअघि रोनाल्डोले आफ्ना फ्यानहरुलाई दिए यस्तो अभिव्यक्तिले फ्यानहरुमा छायो खुशीयाली
गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नेपाली र अन्य मनाङेसहित ४ मन्त्रीले लिए सपथ,पाए यि मन्त्रालय पूरा हेर्नुहोस्।
पाचौँ पटक थपियो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म हुने निषेधाज्ञा? के-के गर्न पाइने?के गर्न नपाईने ?यस्तो मोडालिटी
युरोकपमा आज हुने ३ खेल, कस कसको, कति बजे ? कसरी हर्ने लाईभ ?
अष्ट्रेलियन कोच ग्राहम अर्नोल्डले नेपाली टिमको खेल देखेर अचम्ममा परे भन्दै गरे यस्तो प्रशंसा
नेपाली कांग्रेसका बाग्मती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न तयार रहेको भनेपछी,
ज्ञानेन्द्र शाहीको समूहमाथि फेरि आक्रमण, भन्छन्- ‘सरकार पक्षले यस कारण योजनाबद्ध रूपमा गरेको हो’
युरोकप विजेताले कति पाउछ पुरस्कार राशि ? हेर्नुहोस्।
खुशीको खबर : नेपालले मात्र दुई बलमै खेल जितेपछि दुनियाँ चकित, बन्यो कसैले तोड्न नसक्ने बिश्व रेकर्ड सक्दो शेयर गरौ
साबधान रहन मौसमविदको आग्रह : नेपालको पूर्वी भेगबाट मनसुन गर्यो प्रवेश, एक दुई दिनमै देशैभरि फैलिने
खोप लगाउन आएका सर्वसाधरणमाथि वडा अध्यक्षद्वारा अभद्र ब्यवहार गरेपछी…
सरकारको नियत नै ठिक नभएको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि…
अमेरिकामा खोप लगाएका सयौँ जनाको मुटु सुन्निएपछि सीडीसीले बोलायो आपतकालीन बैठक, विश्वलाई होशियार रहन आग्रह
सभामुख सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सक्कियो,निस्कियो यस्तो निचोड